FBSမှချီးမြှင့်ပေးမယ့် Lexusကားကို ဘယ်သူရရှိမလဲ?!
ချစ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျား! “FBS Lexusကိုမောင်းနှင်ပါ” ကားပရိုမိုးရှင်းအသစ် ကျင်းပပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကြေငြာပေးခွင့်ရတဲ့အတွက် အလွန်ပဲပျော်ရွှင်မိပါသည်! ယခုအကြိမ်တွင်တော့ ဆုလက်ဆောင်အဖြစ် ချီးမြှင့်စေလိုသည့် ကားအမျိုးအစားကို ဖောက်သည်တို့ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ပေးစေခဲ့ပါသည်. အကြိုက်ဆုံးကားမှာ Lexus RX 200t ဖြစ်ပါသည်! ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းများကလည်း လွယ်ကူပါသည် - စစချင်း ဒေါ်လာတစ်ထောင်နှင့်အထက် ရင်းနှီးငွေထည့်သွင်းလိုက်ပါ၊ lot၅ခုပြည့်အောင်အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ပြီး ကံစမ်းမဲကုတ်နံပါတ် တစ်ခုရယူလိုက်ပါ. ကံစမ်းမဲကုတ်နံပါတ်များများရလေ ကားကို ရရှိဖို့အခွင့်အရေးပိုရလေပဲဖြစ်ပါသည်. ထိုLexusကားကို ဘယ်သူလိုချင်ပါသလဲ?! လာရောက် ပူးပေါင်းကာ ဆုရယူလိုက်ပါ! အခြားဆုလက်ဆောင်တွေလဲစီစဉ်ထားပါသည်. iPhones7၁၀လုံးနှင့် Fbsတီရှပ် အထည်၁၀၀ကိုလဲ မဲဖောက်ပေးသွားဦးမှာ ဖြစ်ပါသည်. မြန်မြန်လေး ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုက်​ပါ - ပရိုမိုးရှင်းပွဲကို၂၀၁၇ ဇူလိုင် ၂၅ရက်ကနေ ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀ရက်နေ့အထိကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်. သင်ကံကောင်းပါစေ!